Ubhaliso kunye nokurhoxiswa kwi-IGBM yowama-2019 | Ezezimali
UJoseph kwakhona | | Bolsa, Uqoqosho ngokubanzi, Iimveliso zezemali
I-IGBM, njengoko abatyali mali baseSpain beya kwazi kakuhle, yiGeneral Index yeMadrid Stock Exchange kwaye ibonelela ngothotho lwamaxabiso esitokhwe kwiimeko ezininzi awaziwa ngabasebenzisi. Kulo nyaka apho sibhaptizwa bahlanganisiwe amaxabiso e-127 ewonke emele enye yezona zinikezelo zinamandla zamashishini kwilizwekazi elidala. Apho onke amacandelo amelweyo, ukusuka kwi-inshurensi ukuya kwicandelo lokhenketho, ngokusebenzisa iinkampani zokwakha ezisoloko zikhona elizweni.
I-Madrid Stock Exchange inokuba sisalathiso esingaphaya kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35. La ngamaxabiso anokuba ngaphezulu ayaziwa kwinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kodwa hayi ngenxa yesi sizathu, ukucebisa okuncinci ukubaqesha kwaye senze ukugcinwa kwethu kunenzuzo ukusukela ngoku. Kungenxa yokuba eneneni, ukuba zibonakaliswa yinto ngalo mzuzu, kungenxa yokuba unokufumana amathuba okwenene eshishini. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ukuba ukhuseleko oludweliswe kwi-IGBM okanye kwi-IGBM lubonakaliswa ngento ethile Isalathiso ngokubanzi seMadrid Stock Exchange Kungenxa yokuba banentloko encinci. Ngamanye amagama, ziinkampani ezincinci ezigcina umthamo wentengiso kwizihloko zawo ezisezantsi. Ukusuka kule ndawo yokujonga, zizindululo ezilula zokurhweba kwizandla ezomeleleyo zeemarike zezemali, kwaye le nyani ichaza umngcipheko kubatyali mali. Esi sesona sithintelo sikhulu sokukhetha isalathiso sezabelo zaseSpain.
1 IGBM: uphononongo kubume bayo
2 Ukuphakama kwizabelo zeMadrid
3 Amaxhoba kwi-IGBM
4 Athini amaxabiso esi salathisi?
5 Olunye uphawu olufanelekileyo
6 Ukusebenza kwi-Intanethi
IGBM: uphononongo kubume bayo
IKomiti yoLawulo yeSalathiso esiBanzi seMadrid Stock Exchange (IGBM) ithathe isigqibo, ngokungqinelana nemigangatho yezobugcisa yokwenziwa kunye nokubalwa kwee-indices, ukuvuma ukwakhiwa kwe-IGBM kunye nesalathiso esipheleleyo Isiqingatha sokuqala se-2019. Ngokusekwe kurhwebo kunye nedatha eyinkunzi yonyaka, amaxabiso amane amatsha adityaniswa kwisalathiso kwaye amanye amane alahliwe ngokubhekisele kulwakhiwo lokugqibela, apho i-IGBM kunye nesalathiso esipheleleyo kwisiqingatha sokuqala se-2019 Inamaxabiso ali-127.
Kwangokunjalo, ikomiti icebise ukuhlengahlengiswa kwamacandelo apho isalathiso secandelo lezemali kunye nele real estate lahlulwe labini: isalathiso se icandelo leenkonzo zezimali kunye nesalathiso secandelo leenkonzo zokuthengiswa kwezindlu. Ngokwesi sicelo, isalathiso secandelo lezemali elitsha liya kuba nezalathiso zamacandelwana amane: iibhanki kunye neebhanki zokonga, i-inshurensi, iipotifoliyo kunye neenkampani ezibambeleyo, kunye neenkonzo zotyalo-mali. Okwangoku, icandelo leenkonzo zokuthengiswa kwezindlu liya kuba nee-indices ezimbini zecandelo: iarhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nezinye kunye neSOCIMI.
Ukuphakama kwizabelo zeMadrid
Isishwankathelo sotshintsho ngokubhekisele kulwakhiwo lokugqibela ngolu hlobo lulandelayo. Ngokumalunga nezongezo ezithe zenzeka ngeli xesha kwi-IGBM okanye kwi-General Index ye-Madrid Stock Exchange, zezo zidweliswe apha ngezantsi.
Ukubanjwa kweAmrestIxabiso elitsha kuluhlu ngoNovemba 21, 2018. Ifakiwe kwisalathiso secandelo leenkonzo zabathengi, ezokuzonwabisa, ezokhenketho kunye necandelo lokubuka iindwendwe.
IArima yokuThengisa iiarhenteIxabiso elitsha lodweliso ngo-Okthobha 23, 2018. Ifakiwe kwiReal Estate Sector Index, iSocimi subsector.
Iindleko zezabelo Berkeley Energia LimitedIxabiso lokungeniswa elitsha kwiNtengiso yeStock ngoJulayi 18, 2018. Ifakiwe kwisalathiso sezinto ezisisiseko, ishishini kunye necandelo lokwakha, izimbiwa, isinyithi kunye notshintsho lwecandelo lesinyithi seemveliso zentsimbi.
ISolarpack Technological Corporation, njengexabiso elitsha lokwamkelwa kwiStock Exchange ngoDisemba 5, 2018. Ifakiwe kwisalathiso secandelo leoyile kunye namandla, kwicandelwana lamandla ahlaziyekayo.
Ngokubhekisele kwezi ntshukumo kukwakho nabathile ababaluleke ngokukodwa kwaye nabaphi na abatyali zimali abancinci nabaphakathi kufuneka bathathele ingqalelo ukwenza ipotifoliyo yotyalo-mali lwabo kulo nyaka. Njengakwimeko yezi nkampani zidwelisiweyo zilandelayo:
Iziseko zophuhliso ze-AbertisNgokurhafiswa kwiNtengiso yeStock ngo-Agasti 6, 2018, emva koMnikelo woLuntu wokuFumana (i-OPA) owenziwe nguHochtief AG.
Iqela leAdveo laMazwe ngaMazwe, enqunyanyisiweyo kurhwebo yi-CNMV nge-14 kaNovemba ngo-2018 ngenxa yenkqubo yokuxhaswa kwakhona kwemali kunye nokwamkelwa kwenkqubo yokhuselo ebonelelwe kwinqaku le-5bis yoMthetho 22/2003.
Iiborges zezoLimo kunye nezoMveliso zaMashishini, yokungahlangabezani neendlela zokukhetha kunye nokusisigxina.
Amaphepha aseYurophu kunye neKhadibhodiNgenxa yesicelo sokuthathwa kwezabelo zayo ezenziwe nguDS Smith Plc. onjongo yazo ikukukhuthaza ukubekelwa ecaleni kwezabelo kuthengiso lwezorhwebo lwaseSpain.
Athini amaxabiso esi salathisi?
Umbuzo uninzi lwabatyali zimali abancinci nabaphakathi elizweni lethu abazibuze wona kukuba loluphi uhlobo lokhuseleko abaya kulufumana ukuba ekugqibeleni bakhethe i-IGBM okanye i-General Index ye-Madrid Stock Exchange. Akumangalisi ukuba babonise ezinye iimpawu ezizodwa kakhulu phantse zonke kwaye asinakho ukubala kwezi profayile. Ngokukodwa ukuba sifuna ukusebenza nabo kwezi zihlandlo zichanekileyo. Ewe, siza kukuveza ezinye zezitshixo ezichaza la maxabiso akhethekileyo esitokhwe.
Ukuguquguquka: ezi ngamaxabiso abonisa umohluko omkhulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Apho kunokubakho iyantlukwano engaphezulu kwe-2% okanye nangamandla amakhulu. Ukusuka kule ndawo yokujonga amaxabiso antsonkothileyo anokusebenza nawo. Apho unokuhlala ubambekile ukuba ukuvela kwayo akulindelekile ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukusukela ekuqaleni.
Zimbalwa izihloko ezithengisiweyo: Le yenye yegalelo layo elifanelekileyo kwaye ekhokelela ekuphambukeni kwayo kunobundlobongela ngakumbi kunakwizalathiso ezikhethiweyo zezabelo zamazwe. Ngomngcipheko wokuba unokuba neengxaki ezithile zokuhlengahlengisa ukuthenga nokuthengisa amaxabiso kuyo yonke imisebenzi yakho.
Olunye uphawu olufanelekileyo
Eminye imiqondiso eboniswe kukhuseleko oludweliswe kwi-IGBM okanye kwi-General Index ye-Madrid Stock Exchange yeyesibini. Kodwa kungenxa yesi sizathu, kungabalulekanga kangako ukuze ubathathele ingqalelo ekwenzeni imisebenzi yakho kwiimarike zezemali. Umzekelo, ezo sizibonisa apha ngezantsi:
Zimele ishishini lokufumana imali okanye ezifuna imali yokuphuhlisa izindululo zeshishini. Kwelinye icala, inzala abayivusayo phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi kunqabile. Ukuya kwinqanaba lokuba ukuthatha kwabo izikhundla ngokuqinisekileyo akonelanga kwiimeko ezininzi nangaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo.
Inzala encinci kwicala labarhwebi abaziingcali yenye yeempawu zayo ezifanelekileyo. Le nto ichaphazela oko azilandelwa kwaye abayonxalenye yeepotfoliyo zotyalo mali ezihlala zenziwa ngabaphathi bengxowa-mali, kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu. Ukusuka kolu luvo, kususa ukuthembeka kubo ukuba babe ngabamkeli kwimisebenzi yabatyali zimali zentengiso.
Ukubeka iliso kwayo kuhlala kunzima ngakumbi kunakwamanye amazwe ezemali. Phakathi kwezinye izizathu, kuba kuninzi ngakumbi nzima uhlalutyo lwakho lobugcisa kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga iziseko zayo. Ngale ndlela, akufuneki ilibale ukuba ezinye zezi zokhuseleko zisandula ukwenziwa kwaye ke azinayo imbali kuluhlu oluza kuhlaziywa ngeziqinisekiso ezikhulu zempumelelo.
Kufuneka ithathelwe ingqalelo into yokuba amaziko avumela ukusebenza kwemali kwi-Intanethi kufuneka abe nawo iindlela zobugcisa kunye nabantu abaqinisekisa ukhuseleko kunye nokugcinwa okuyimfihlo kwentengiselwano. Kanye nokwenza ukuba umtyali mali afumane lonke ulwazi olufanelekileyo ukuze bathathe izigqibo ezinolwazi. Ngokumalunga nokukhuseleka okubandakanyiweyo kwi-IGBM okanye kwi-General Index ye-Madrid Stock Exchange.
Ukongeza, iinkqubo zabo kufuneka zibe namandla ngokwaneleyo okujongana neemeko ezigabadeleyo kwiimarike okanye ngenxa imiqulu ephezulu yomsebenzi. Ke ngoko kuyacetyiswa kwaye kunyanzelekile ukuba umtyali mali asebenze namashishini abhalisiweyo afanelwe ukuthembakala okwaneleyo kwaye anezicwangciso ezifanelekileyo zokuhambelana noko. Le nto isebenza ngokukodwa kwiimpawu ezikhethekileyo njengalezo zenza i-index yezabelo zamazwe.
Ngayiphi na imeko, kufuneka kukhunjulwe ukuba ezi zindululo zotyalo mali kwimarike yemasheya azingcono okanye zimbi kunezinye. Ukuba akunjalo, iya kuxhomekeka kwezinye izinto, kubandakanya iprofayili ebonelelwe ngumtyali mali omncinci okanye ophakathi. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke amandla ayo okuthatha imisebenzi ephezulu yomngcipheko. Apho unokufumana khona imali eninzi, kodwa kwelinye icala, shiya ii-euro ezininzi endleleni. Nangona inzuzo ingafana naleyo uyifumanayo ngokwexabiso lesitokhwe eliqhelekileyo, elingasemva kwayo yonke loo nto. Kule meko, ngenye indlela yotyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ubhaliso kunye nokucinywa kwi-IGBM yowama-2019